Ọ bụ ezie na e nwere echiche na mma bụ nke ụdị nke onyinye na-enweghị mmeri , ma nke a anaghị egbochi ndị inye onyinye na-eweta n'ezie chic ịtụnanya ndị dinta ma ọ bụ ndị nchịkọta. Kedu ihe nwere ike ịme ihe dị egwu karịa mma dị mma na obere ọnụ ego dị oke ọnụ!
Knife na-ekpuchi Nhọrọ
Ya mere, olee otu enwere ike isi bụrụ mma? Ngwa a na-ekewa dịka ụdị knives onwe ha, ihe eji emepụta na klas nke nwere ike ịkọ isiokwu ahụ. Dabere na njirisi ndị a, anyị ga-edekọta ndepụta nke ụdị ndị a ga - eji mee ya maka okwu ọma:
Ikpe maka mmachi mpịakọta ga-abụ kọmpat na ihe bara uru. Dị ka a na-achị, ihe ndị dị otú ahụ adịkarịghị eji ihe ndị dị oké ọnụ. Ọ ga-abụ na ọ ga - abụ ngwaahịa e ji eme ihe siri ike dị ka nylon. Akpa maka mmachi mpịakọta fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile na-anọchite anya ihe dị ka akpa n'akpa. Ọtụtụ ụdị nke ihe eji emepụta ihe, nke na-agụnye ngaji, ndụdụ na mma, n'ime ikpe ahụ nwere obere nkedo maka idozi eriri na azụ azụ.
Ihe dị iche dị iche iche maka mma ịchụ nta. A naghị enweta ngwaahịa dị otú ahụ na ụlọ ahịa na-echefu ego. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ ihe eji eji aka. A na-akpọ ihe mkpuchi maka mma site na akpụkpọ anụ ihe ngwọta maka ịchụ nta skarba. Ọ dị mkpa ịchọta ngwaahịa dị mma, kwadebe maka nnukwu ụgwọ ya. A na-esite na akpụkpọ ahụ dị oke akpụkpọ ahụ, a na-ejikwa ihe eji akpụkpọ anụ mee ka eriri ahụ ghara ịkpụcha ya. A na-eji akwa akpụkpọ anụ kpuchie mma nke akpụkpọ anụ ahụ na-eji mma akpụkpọ anụ mee ihe, ihe ngwaahịa a kpuchie ya. Ọtụtụ mgbe, mma na mkpuchi na-aga abụọ, ma ịzụrụ ọbọ, dịka ihe mgbakwunye na onyinye bụ isi nwere ebe ọ ga-adị. E nwekwara "ihe ndị nkịtị" nke magazin a na-eji akpụkpọ anụ nkịtị mee ihe dị ka otu ntanetị, ma àgwà ha ejighị ya na ngwaahịa ndị na-adịghị.
O juru anya, ma enwekwara ihe mkpuchi maka mma kichin. Taa, a na-eji anyị na-azụ mma na nkwụ nwere ike ịzụta ha iche iche. Otú ọ dị, n'elu ụlọ ahịa ị ga-ahụ mma, na-eji ihe mkpuchi. Nke a bụ ngwaahịa plastic nke na-echebe mkpịsị aka gị site na mmerụ ahụ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye aka na imewe mma, na-enye ha otu ngwa ngwa maka ha. Ọtụtụ mgbe ụdị mma niile nwere nọmba. Ọ na-adịrị ya mfe karị ịhọrọ ụdị mkpuchi kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ naanị ụdị ole na ole. A na-eji aka eme ihe kachasị ọnụ, dị ka ihe osise ọ bụla si kwuo, ụfọdụ na-enwe ọla edo n'ụdị nkume. Onyinye eze n'eziokwu nye onye obula na dinta!
Sauna maka ihu
Mkpụrụ mmanya na-acha ọbara ọbara
Utu maka igbutu ugbo polypropylene
Nche nche na ulo
Mgbachi eletrik maka ọnụ ụzọ wicket
Ikuku isi ikuku kacha mma
Nhazi maka ihe mgbochi
Herpes na akpịrị
Ulo na-ekpuchi ụlọ
Ihe nkedo nke nnukwu mating - 46 foto nke ụdị ihe niile
Kedu ka ụmụ agbọghọ si eme baptizim?
Oge elekere maka iRhone
Obodo Ski Ski, Finland
Mmiri Ammonia - ngwa
Ndị ọbịa na agbamakwụkwọ - ihe ị ga-eyi?
Mmiri Sea-buckthorn maka oyi
Esi eji aka aka gị zoo otu mmiri mmiri?
Uwe maka Ugwu Yorkshire
Ero ofe na ọkụkọ
Dioxydin na ntị
Uhie tii dị mma na ihe ọjọọ
Ntak emi nwatakịrị ahụ nwere ire odo?
Ụdị ọbara ọgbụgba